ILIFE V5 ဖုန်စုပ်စက် - စက်မှစျေးနှုန်း ...
အစအိမ်ILIFE V5 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
ILIFE V5 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်မတ်လ 2020,41:34 pm တွင်
ILIFE V5 Intelligent စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်
iLife v5 စက်ရုပ်ဖုန်စုပ်စက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ILIFE V5 လုပ်ဆောင်ခြင်း, သန့်ရှင်းရေးစမ်းသပ်ခြင်းနဲ့သုံးသပ်ချက်များ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: ILIFE V5 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
X ကိုက x 47.00 41.00 16.00 စင်တီမီတာ x ကို 18.5 16.14 6.3 လက်မ x ကို
X ကိုက x 30.00 30.00 7.00 စင်တီမီတာ x ကို 11.81 11.81 2.76 လက်မ x ကို
ပျော်စေဧရိယာ ( sq.m. )
120 - 150 စတုရန်းမီတာ
အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး, နယ်စပ်သန့်ရှင်းရေး, အစက်အပြောက်သန့်ရှင်းရေး, အချိန်ဇယားကိုသန့်ရှင်းရေး
စိုစွတ်ခြောက်သွေ့သော mopping, မောင်း,
X ကိုဖုန်စုပ်စက် 1, အခြေစိုက်စခန်း remote control က x 1 အားသွင်း 1 x ကိုကိုယ်ပိုင်, 1 Adapter ကို, Brush x 1,2ဘေးထွက် brush, 1 x ကို Filter ကို x x, သန့်ရှင်းရေးပိတ်စ 1, 1 x အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x
ILIFE V5 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ3ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ILIFE V5 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
Gord - 2019 10 ဇွန်
ဤသူကားငါအဘယ်သူမျှမနှိုင်းယှဉ်ကြဒါငါပိုင်ပြီပထမဆုံးစက်ရုပ်လေဟာနယ်၌တည်၏။ ငါ 700sq ပေကြမ်းပြင်ဧရိယာအကြောင်းကိုအားလုံး laminet ရှိသည်။ ငါညွှန်ကြားချက်နှုန်းအတိုင်းကြမ်းပြင်ဧရိယာရှင်းလင်းရေးပြီးနောက်အသုံးပြုပထမဦးဆုံးအကြိမ်, ငါကလှည့်ပတ်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ငါပစ်ကပ်ရန်သူတို့ကိုစည်းတက်ဖမ်းရလိုသည့် V5 အဖြစ်အနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့တံခါးကိုဖျာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါအချို့ဆီမီးခွက်ကြိုးများနှင့်ထိုသို့သော, တကယ်လမ်းသို့မဟုတ်ထမြောက်စေထဲကတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိခဲ့ရတယ်။ ငါ့အိပ်ရာကိုလည်းကျနော်တို့မသွားကောင်းသောခဲ့ကြသည်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဒါကသေးငယ်တဲ့သင်ယူမှုကွေးဖတ်နေ stuck.After ရတဲ့အနေဖြင့်ယူနစ်ရှောင်ကြဉ်ပါရန် caster အမြင့်ရုပ်သိမ်းခံရဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးစုံတွဲစင်ကြယ်သော, ငါသည်က်မှတဆင့်ယူနစ်သွန်ကြရတယ်။ ဒါဟာပရိဘောဂအောက်တွင်ထံမှဖုန်နှင့်ဖုန်မှုန့် Bunny လာပြီမှာအကြီးအအလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ ငါအမိန့်၏အချိန်မှာအပို filter များနှင့်စုတ်တံရတယ်။ အဆိုပါ filter များကောင်းတစ်စိတ်ကူးရှိခဲ့သည့်ယူနစ်ကအမြဲတံခါးနားမှာငါ့အဖိနပ်ကိုချွတ်ယူမထားဘူးသူတစ်ဦး brushes.Being အားလပ်ချိန်မှာတို့နှင့်အတူကြွသည်, V5 ငါ၏အထပ် clean.Pros စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနေမှာအကြီးအအလုပ်တစ်ခုပြုတော်မူပြီ: ကောင်းသောပစ်ကပ်, ကိုယ်ပိုင် docking ကောင်းသောအလွှမ်းခြုံ, ကောင်းသောဘက်ထရီ life.Cons: ကသေးငယ်တဲ့ကျောဇောနှင့်ရှုပ်ပွနေအောင် areas.can နဲ့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကို (မော်တာထွက်ကိုမီးရှို့ခြင်းထက် သာ. ကောင်း၏ဘယ်ဟာ) ဖမ်းရမယ့်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးကြီးထွားလာရှေ့ဖြီးအလွန်ချောင်နှင့်ရှည်လျားသောဖိုင်ဘာရှိပါတယ်ဒါကဧရိယာကော်ဇောပေါ်တက်တယ်။ အဆိုပါစက်ရုပ်ထို့နောက်အိပ်ပျော်ခြင်း mode ကိုသူကိုယ်တိုင်သွင်းထားပြီးတော့, ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်ဖွင့်အပ်ပေးတော်မူ၏။ တကယ်တော့ငါကဒီတစ်လိုလားသူများနှင့်တစ်ဦး con မဟုတ်ပါဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါဟာအတောမသတ် spinning စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မော်တာကိုသတ်မယ့်အစားဖြီး၏အတွင်းသဘောကာကွယ်ပါနိုင်ပါတယ်။ ငါ untangled ပါတယ်ပြီးနောက်, စင်ကြယ် button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကနိုးနှင့်က "သာမန်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
Austin - 2019 10 ဇွန်
ကျွန်တော့်ဇနီးကအမြဲ mopping နှင့်လောကထဲကလူတော်တော်များများသည်။ နီးပါးသန့်ရှင်းမှုအဘို့အစွဲတစ်ခုအမှတ်ရန်။ သူမ၏သူမ၏ဒူးပျေါရဖို့အတှကျယခုသူသည်သင်၏ကိုယ်ဝန်သို့6လအတွင်းရဲ့အကြောင်း, ဒါကြောင့်ခက်ခဲတယ်။ ဒါနဲ့သူမအဘို့ဤအနည်းငယ်သာကောင်လေးတယ်။ ပထမတော့သူမသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်နှင့်အရာခပ်သိမ်း setup ကိုရရှိပါသည်ပြီးနောက်ဒါပေမယ့်သူမသဘောကျပါတယ်။ ညာဘက် box ကိုထဲကအားသွင်းခြင်းမရှိဘဲ, အဲဒါကိုအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်တစ် 30 မိနစ်သရုပ်ပြလုပ်ဖို့နိုင်သူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကပ်လျက်အခန်းတစ်ခန်းအဆင့်ကိုချွတ်အနည်းငယ်ပင်အဘယ်မှာရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်ပုံရေလွှမ်းမိုးထွက်စမ်းသပ်ပြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းအကြားတစျဦးကအခန်း 1 ပိုမိုမြင့်မားလက်မဖြစ်ပါသည်, နဲ့အခြားအခန်းတစ်ခန်းမတူညီတဲ့အဆင့်2လက်မဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ILIFE v5 အတိတ်မှခန်းနှင့်ထိုသို့ပြုမှတိုးမြှင့်တောင်းခံချက်များအရာအားလုံးကြားနိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြေး 30 မိနစ်၏အဆုံးသည်အဖုံးဖွင့်ဖွင့်လှစ်မှာမြေမှုန့်စုစည်းကွန်တိန်နာအထဲကနှုတ် ယူ. , ပစ္စည်းပစ္စယအမျိုးမျိုးတို့ကိုအထဲတွင်ရှိခဲ့။ ဖုန်မှုန့်, crackers, ပုတီးနှင့်ဆံပင်။ ဆံပင်အများကြီး။ ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကဒီနည်းနည်းကောင်လေးနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ နှင့်ပြီးသား, မယားမိတ်ဆွေစုံတွဲတစ်တွဲမှဒီထုတ်ကုန်အကြံပြုခဲ့သည်။ - တခါတလေအဲဒါကိုအချို့ပရိဘောဂများ၏နယ်နိမိတ်ကဲ့သို့တစ်ဝက်ကိုတက်နိုင်ပါတယ်အတားအဆီးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် Tenda မှီဝဲရ။ - ဒါဟာနည်းနည်းဆူညံင်, သင်ကဝေးနေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေအလုပ်လုပ်စကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ - အောက်ခြေကသန့်ရှင်းရေးသံသရာပြီးဆုံးပြီးနောက် Tenda အတော်လေးညစ်ပတ်ရဖို့။ - ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကိုသို့တိုးမြှင့်မီပေမယ့်သူတို့ကိုသို့သူတို့ကိုဒါပြန်တယ်မမြင်ရပါဘူးနှင့်သူတို့ကိုအနည်းငယ်န်းကျင်လှုံ့ဆော်ပေးကုလားထိုင်၏ခြေထောက်များနဲ့တူအချို့သောအရာနှင့်အရာဝတ္ထု detect ။ - ဒါဟာတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာပရိုဂရမ်သာစရာမလိုဘဲလုပ်နိုင်ပေမယ့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကြိမ်တစ်နေ့လျှင်ပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်ကြောင်းအစာရှောင်ခြင်းအလုံအလောက်ဘက်ထရီစွဲချက်။
အာသာ - 2019 10 ဇွန်
- ဒါဟာကော်ဇောပေါ်မှာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ် - အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်, သင်ကခလုတ်နှိပ်ကြောင့်ဘက်ထရီအပေါ်အနိမ့်ရရှိသွားတဲ့တိုင်အောင်တစ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အပေါ်တတ် - အခါတာဝန်ခံက၎င်း၏နိမ့်အလိုအလျောက်ယင်း၏အခြေခံမှပြန်လည်ရောက်ရှိ - ဒါဟာတစ်ဦးပါဝင်သည်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ကို attachment ရှိပါတယ်, ရေမရှိသော အကြံပေးအဖွဲ့ပေမယ့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းစွာသင်အထည်ပေါ်သို့ကကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတူညီတဲ့ပြေးအတွက်လေဟာနယ်နဲ့ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ် actualy နိုင်ပါတယ်။ - ကလှေကားကိုချွတ်ကျဆုံးခြင်း does't ဒါဖြစ်နိုင်သောကြီးမားသောပေါက်ထောက်လှမ်း။ - ဒါဟာအပြင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သာ activate လုပ်ဖို့အစီအစဉ်နိုင်ပါတယ်။ - ဒါဟာနောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်း shouldnt ဒီတော့သူတို့ကအစားထိုး filter များနှင့်စုတ်တံတို့ပါဝင်သည် - အချိန်ကိုတစ်ဦးအလတ်စားအိမ်သူအိမ်သား 80% ပြန်အခြေစိုက်စခန်းမှ၎င်း၏နည်းလမ်းရှာနိုင်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ - ဘင်ရုံအလုံအလောက်ရှိပါတယ်အဆိုပါမြေမှုန့် - အဲဒါကိုငါ့အိပ်ရာနှင့်ပရိဘောဂအောက်တွင်ကိုက်ညီပါးလွှာအလုံအလောက်ရဲ့ နေ့စဉ်ပြေးသို့မဟုတ်နှစ်ခု max ကိုများအတွက်စွမ်းရည်။ - ဘက်ထရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်၏နှစ်နာရီПлохонаходитбазуကြီးလှ၏။ Пропускаетмногомусора။ Долгозаряжается။ Работаеттолько2часа။ Шумит။
XL8301 LCD ကို multimeter
3 အရှေ့တောင် 4k ကင်မရာđi Phantom မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
လျှပ်စစ်စက်ဘီး (1km / ဇသာလျှပ်စစ်မီး 25km ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး) ခေါက် FIIDO D40
i7s Mini ကိုကြိုးမဲ့ Bluetooth နားကြပ်